Odayaasha Dhuusamareeb “Alshabaab Hajoojiyaan Duulaanka, Hadii kale!” – SBC
Odayaasha Dhuusamareeb “Alshabaab Hajoojiyaan Duulaanka, Hadii kale!”
DEG DEG: Laba Askari Oo Lagu Dilay Boosaaso
Wararkii ugu dambeeyay ee siyaasiyiin xalay xabsiga loo taxaabay iyo waddooyin xiran
Ka dib kulan balaaran oo ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi ayaa waxaa ay ka soo saareen baaq ka dhan ah weerarada ciidamada xarakada Alshabaab ay ku soo qaadaan gobolka siiba Magaalada Dhuusamareeb,
Ujeedka ugu weyn kulankan ayaa ahaa sida ugu macquulsan ee looga joojin karo gudaha magaalada Dhuusamareen dagaalada iyo weerarada ku soo laalaabtay, kuwaasi oo u dhexeeya dhinaycada Xarakada Alshabaab iyo Ahlusuna.
Odayaasha oo qaarkood ka dib kulankaasi la hadlay Saxafada ayaa dalbaday in labada dhinac ee is haya ay joojiyaan dagaalada ay ku soo qaadayaan magaalada Xarunta ah, kooxdii weerar ku soo qaadaana ay yeelaneyso Masuuliyada iyo Baaba’a dhasha.
Sidoo kale Odayaasha dhaqanku waxa ay fariin u direen Xoogaga Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab taas oo ay ku leeyihiin (Joojiya duulaanka) islamarkaana aanay jirin cid duulaan iyaga ku heysa, hadiise ay joojin waayaan ay qaadayaan talaabo ay kaga hortagayaan.
Sikastaba ha ahaatee Hadalka Odayaasha Dhaqanka waxa uu ku soo aadayaa xili waayadii ugu dambeysay ay gobolka ku soo laalaabanayeen dagaalad iyo abaabulada Dagaal ee ay Alshabaab iyo Ahlusuna ugu hardamayaan Dhuusamareeb, taasi oo saameyb weyn ku yeelatay dadweynihii ku dhaqnaa, kaliftayna in ay duurka u hoydaan.